I-Front Pool Luxurious Suite (Ranch Eksru) - I-Airbnb
I-Front Pool Luxurious Suite (Ranch Eksru)
Anatoliki Attiki, i-Greece
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Alexandra izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Front pool suite kanokusho ekwazi ukuhlalisa abantu abangu-4. Inketho ekahle yemibhangqwana, imindeni kanye neqembu labangane. Uzozizwa ukhululekile kakhulu njengoba igumbi lingena ehlathini laseNyakatho ye-Athens-azikho iziphazamiso.
Iphuli yokubhukuda ayiyona imfihlo njengoba sinamanye amasuite amabili esakhiweni. Iphuli isetshenziselwa kuphela labo abahlala kuma-suites. Amaphathi, ukubhema, izidakamizwa nomculo onomsindo akuvunyelwe. Ngena ngemva kuka-23:00 kunezindleko ezengeziwe ezingu-25 €. Indawo yonke iyindawo lapho abantu bengakwazi ukuhlela imicimbi yabo, kodwa uma ibhukhelwe imicimbi izinsuku zizokhishwa.
Inombolo yepholisi: 00001152970
Hlola ezinye izinketho ezise- Anatoliki Attiki namaphethelo